Nanome fanampiana ny CCOD ao Moramanga i Ambatovy. - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nanome fitaovana ilaina amin’ny fitsaboana sy fanafody mamono tsimokaretina miaraka amin’ny fitaovana famendrahana ny « Centre de Commandement Opérationnel du District (CCOD) » ao Moramanga amin’ny ady amin’ny Covid 19 sy nanome tosika ho an’ny tantsaha mpiompy trondro ihany koa ao amin’io distrika io ihany ny orinasa Ambatovy tamin’izao hamehana ara-pahasalamana izao, tamin’ny volana avrily lasa teo.
Tohana ho an’ny fiompiana trondro
Nahazo fankasitrahana sy tohana avy amin’ny orinasa Ambatovy ihany koa ny resaka fiompiana trondro tao Moramanga ihany. Fanomezana zana-trondro karpa sy tilapia 3 000 ho fanatsarana ny velontena. Nahazo izany tohana izany avy amin’ny Foibem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin’ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra (FOFIFA) ny mpikambana iray ao amin’ny federasion’ny fikambanan’ny tantsaha FIMIAM Ratovonary Edmond ao Ampitambe, Moramanga. Tontosa izany noho ireo vokatra tsara azony isan-taona tamin’ny tetikasa nataon’Ambatovy ho fampiroboroboana an’io seha-pihariana io. Singanina amin’ireo vokatra tsara maro azo tamin’ny alalan’ny fiaraha-miasa teo amin’ny orinasa sy ny mpiompy trondro manodidina ny toeram-pitrandrahany ao Moramanga ary ny sampandraharaha CIRAEP ao Moramanga izany. Tsiahivina fa tamin’ny fotoana nanombohan’Ambatovy ny tetikasa, ny taona 2018, dia izy no niantoka ny lahitrondro sy ny renitrondro, ny sakafony tany ampiandohan’ny tetikasa nametrahana ireo dobo filamatra dimy hamokarana zana-trondro. Noraisiny an-tanana ihany koa ny fitaterana ireo zana-trondro ho any amin’ireo dobo fanatavezana sy ny fampiofanana ireo mpiompy trondro teo amin’ny lafiny teknikam-piompiana.
Ranom-panafody fanadiovana, fitaovana fampiasa any amin’ny birao ary “groupe électrogène” ho an’ny tomponandraikitra eo amin’ny sehatry ny fahasalamana ao Moramanga, ny volana avrily 2021. Intelo miantoana no nanolorana ireo fitaovana ireo izay misanda 26 tapitrisa ariary mahery. Tamin’ny fiandohan’ny volana avrily no nanolorana ny “groupe électrogène” manana tanjaka 6 KVA.
Ny andiany voalohany tamin’ireo fitaovana nomena izay nahitana arotava karazany FFP2 sy “chirurgicaux”, arotanana ary akanjo fiarovana Tyvek dia ny 16 avrily 2021 no nanolorana azy ho an’ny CCOD Moramanga. Ranom-panafody famonoana tsimokaretina Virokil 30 litatra, fitaovana famendrahana fanafody enina, ranom-panafody fanadiovana ary fitaovana fampiasa amin’ny birao kosa no nomena ny 23 avrily 2021. Fanampin’ireo fandraisana anjara efa nataon’Ambatovy ho an’ny ady amin’ny Covid 19 eto Madagasikara ireo fanomezana ireo. Ho an’ny taona 2020 fotsiny dia nahatratra 1 087 368 027 ariary ny sandan’izany fanampiana izany. Ankoatra izany, nandray fepetra eo amin’ny lafiny fahasalamana hentitra sy fepetra hafa manokana (eo amin’ny lafiny fandrindrana ny fomba fiasa sy fampitaovana) mahakasika ny fanatanterahana ny asa ihany koa Ambatovy mba hiarovana ny mpiasa sy hiantohana ny famokarana mba ho marin-toerana sy lavitra ny loza.
Zava-dehibe ny fifanomezan-tanana teo amin’ny Malagasy, indrindra amin’ny hamehana tahaka izao. Sahirana ireo tantsaha ka mila ny fanohanan’ny rehetra, indrindra fa avy amin’ny orinasa lehibe tahaka izao. Mifanampy sy mifamelona ary mifampiankina mba hialana amin’ny fitiavan-tena ka mankany amin’ny fandrosoana.
Energie renouvelable : Axian Group et GreenYellow lancent l’extension de la centrale d’Ambatolampy - il y a 2 jours
Randrana Sendikaly : Tsy hitondra olana fotsiny fa hitondra vahaolana ihany koa - il y a 17 jours